I-PetLet 17: I-Absolute Waterfront Views + AmaKayak
Ibungazwe ngu-PetLet Holiday Homes - iSuper Host kusukela ngo-2016.
I-Absolute Coorong iyindawo entsha emakethe yamaholide futhi inikeza indawo yokuhlala okunzima ukuyithola enokubukwa kwendingilizi yonkana emanzini acwebile e-The Coorong kanye ne-Coorong National Park… indawo enhle yokubaleka enakho konke ukunethezeka kwekhaya.
Esplanade endaweni encane futhi ebanjwe ngokuqinile yaseNoonameena (17km ukusuka eMeningie kanye ne-90mins ukusuka e-Adelaide), leli khaya elinomoya opholile linikeza imibono emihle kusukela kumpheme ongaphambili, ikhishi nezindawo zokuhlala futhi linekhishi elihlome ngokuphelele, inkosi, indlovukazi kanye amagumbi okulala ayi-bunk, amagumbi okugeza amabili kanye nelondolo. Sekukonke, indlu ilala abantu abadala abangu-4 nezingane ezi-4 (ilineni lombhede lihlinzekwa).
Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzokwazi ukufinyelela kuma-kayak (ama-tandem amabili angashadile kanye nelilodwa, namajakhethi empilo), angethulwa ogwini lokuhlala. Uma isimo sezulu sivuma, ungawela ichibi elingu-2.4km bese unqamula izindunduma uye ogwini lolwandle. Kukhona nezindawo zokwethula i-tinny yakho yokudoba nokuhamba ngesikebhe.
Igumbi Lokulala Eliyinhloko: I-King Bed
Igumbi lokulala lesibili: I-Queen Bed
Igumbi lokulala lesithathu: 2 x Imibhede eyi-Bunk (4 singles)
Sicela uqaphele ukuthi indawo ilala abantu abadala abangafika kwabayisi-6 kuphela (imibhede engaphezulu ayibafanele abantu abadala).